Qarax Xooggan oo ka Dhacay Muqdishu
Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen Qarax gaari oo maanta ka dhacay bartamaha suuqa beerta ee Degamada Waaberi ee Magaalada Muqdisho.
Qaraxan ayaa ka dhashay gaari walxaaha qarxa laga soo buuxiyay oo la dhigay halka laga galo suuqa oo ah suuq ciriiri badan oo lagu iibiyo Khudaarta.
Saraakiisha dowladda iyo goob joogayaasha ayaa VOA ugu sheegay qasaaraha tirooyin kala duwan hase yeeshee qaar ka mid ah wariyeyaasha VOAda ee halkaa tagay ayaa sheegay inay indhahooda ku arkeen meydka ilaa iyo 20 qof.
Sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha amaanka oo ay VOAdu la hadashay ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ninkii watay gaari qarxay oo la tuhunsanyahay inuu isaga ula kac halkaasi u dhigay.Waxey sheegeen inuu isaga laftiisa qaraxa ku dhaawacmay.
Madaxweynaha Dowladda Somalia Xassan Sheekh Maxamuud oo la hadlay warbaahinta dowladda Qaraxa ka dib ayaa cambaareeyay weerarka, isagoo ku amaanay laamanaka amaanka inay gacanta ku soo dhigeen, dhagar qabihii weerarkaasi fuliyay.
Wixii faahfaahin ah ee la xiriira qaraxaas goor dhow ayaad dhageysan doontaan.